अराजक नेता अवाक् जनता « Loktantrapost
अराजक नेता अवाक् जनता
१३ माघ २०७३, बिहीबार १८:२७
कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा ७ प्रहरी र १ बालकको हत्या हुने गरी भएको घटनाको कारण राजनीतिक दलका नेताहरुको अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण भएको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको टिकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खवर कान्तिपुरले छापेको थियो । स्वयम् संसदीय उपसमितिले निकालेको निष्कर्ष मान्य हुनु पर्ने र कारवाही हुनु पर्ने हो । तर, दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको अवस्थामा कारवाहीको कल्पना नै नगरे हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताए । सरकारका वकिलले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु पनि एक किसिमको गैरजिम्मेवार नै मान्नुु पर्दछ । सरकारका कानुनी सल्लाहकारले सरकारलाई कि त ठिक सल्लाह दिनु पर्दछ नत्र चुप लागेर बस्नु नै उत्तम हुन्छ । भएन भने पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ । पद नछोड्ने, सुविधा उपभोग गर्ने अनि सरकारका कामलाई सहयोग नगर्ने कार्य अमर्यादित र गैरजिम्मेवार नै हो । यो शैलीलाई अराजक नै भन्दा पनि हुन्छ ।
भारतमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका महासचिव विजय वर्गियाले शाहरुख खानलाई दाउद इव्राहिमसँग जोडे । केही समय पहिला काङ्ग्रेसका राहुल गान्धीले कुर्ताको फाटेको खल्ती सभामा देखाएको प्रसङ्गलाई शायद व्यङ्ग्य गर्दै होला काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नेलाई विवाहमा लुगा नमिलोस् भने । यस्ता अभिव्यक्तिलाई के भन्ने ? कि अराजक भन्ने ? लामो प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेको भारतको अवस्था यस्तो छ भने हाम्रो ठिकै हो भन्ने कि के भन्ने ?
ठूलाको राय सल्लाह लिनु भन्ने भनाई अनुसार होला बाक्लै गरी हाम्रा नेतागण जाने दक्षिणको छिमेकी भारतको अवस्था यस्तो छ । हाम्रो अवस्था त माथि नै बयान गरी सकियो । यस्तो अभिव्यक्ति दिने आफ्ना नेतालाई देखेर जनता अवाक भएर बसेका होलान् । जनता आखिर के नै गर्न सक्छन् र । भारतमा नोटबन्दीका कारण त्यहाँको भ्रष्टाचार कति गल्यो थाहा छैन । तर, दुरदराजमा कृषि पेशा गर्नेको तरकारी, उखुबारीमा नै रह्यो । गहुँ छर्न समेत पाएनन् । १ सयभन्दा बढीको त लाइनमा बसेर ज्यान नै गयो । पैसा छ तर निजी अस्पतालमा उपचार गर्न नपाएको पीडा पनि बोकेकै छन् भने नेता यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् । सुरक्षित रेल यातायात समेत बारम्बार दुर्घटना भई सयौँ यात्रुको ज्यान जाँदा समेत त्यहाँको सरकार आफू विकासका लागि प्रतिवद्ध भएको उद्घोष गर्न थाक्दैन । आखिर ती त्यहाँका जनताका लागि यी विकासका अभिव्यक्ति पनि त गैरजिम्मेवार नै लाग्दा हुन् । गैरजिम्मेवार नै लागे पनि आखिर जनता निर्वाचनमा मत जाहेर गर्न बाहेक के नै गर्न सक्छन् र ?
हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण कडी निर्वाचन नै हो । भारतमा त प्रजातन्त्र भन्नका लागि कम्तिमा आवधिक निर्वाचन छ । निर्वाचनमा भाग लिई जनताले न्याय गर्ने या दण्ड गर्ने नै छन् । तर, नेपालमा भने यो निर्वाचन अर्थात् एक दिन भए पनि सार्वभौम हुने दिन कहिले आउला भनेर पर्खन बाहेक अरु केही गर्न सकिएन । २०७४ माघ ७ गतेसम्म तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता नेतालाई हो कि जनतालाई ? निर्वाचन तोकिएकै समयसीमामा हुन्छ भन्ने रटान सुनाउनु पनि गैरजिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति नै हो । किनकि सरकारको निकाय निर्वाचन आयोग नै निर्वाचन भन्दा ४ महिना अघि कानुन प्राप्त हुनु पर्ने बताउँछ । स्थानीय निकायको चुनाव गराउनका लागि स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदवाट पास भएको छैन । संविधान संशोधन नभई चुनाव सम्भव छैन भनेर सरकारका मन्त्रीहरु नै भन्छन् । चुनाव घोषणा गर्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेजस्तो हुन्छ भन्छन् ।
अभिव्यक्ति, काम कारवाही सवै गैरजिम्मेवार भएपछि हाम्रो यात्रा कतातिर छ भनेर वुझ्नका लागि धेरै सुत्र चाहिँदैन । हाम्रो यात्रा हाम्रो कामले नै निर्धारण गर्ने भएकाले हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने पनि हाम्रो यात्रा लोकतन्त्र भन्दा मनपरीतन्त्रतिर अगाडि वढिरहेको प्रष्ट छ । यसो भन्दा रिस उठन सक्छ, किनकि हाम्रो संस्कार नै आलोचना सुन्ने खालको छैन । हामी आलोचना होइन, प्रशंसाका पारखी छौँ । त्यसैले आलोचनात्मक चेत भएकाहरु सधैँ निषेध गरिन्छन् र वरिपरि भजन मण्डलीहरु राखिन्छन् ।
त्यसकारण चुनाव गर्नुस् तपाईंका अभिव्यक्ति, व्यवहार र व्रिmयाकलापहरु उपर जनताले फैसला गर्ने छन् । हुन त तपाईंको इच्छा विपरीत परिणाम आएमा तपाईंहरु मान्नु हुन्न । तर, हामी गैरजिम्मेवार र अराजक अभिव्यक्ति दिने कै पक्षमा निर्णय आएमा पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने छाँैं । किनकि निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । जनताको फैसला सर्वोपरी हुनेछ ।